Nhau - Melody 2021 Nyowani Kusvika Kisimusi Imba Imba LED Mwenje Kushongedza / Holiday Presents / Indoor Kushongedza
Kisimusi Imba Village LED Mwenje Kushongedza / Holiday Presents / Indoor Kushongedza
Imba yeKisimusi Kushongedza: Iwo ane mwenje mwenje mwenje akanaka uye anopenya, inova inokwezva maziso sekushongedza kwezororo. Mimhanzi inofadza inokodzera kwazvo mutambo wemafaro.
Multifunctional Tabletop Shongedzo: Iyi yeKisimusi imba yekushongedza yakanyatso kukodzera imba yako, nzvimbo yebasa, yekupinda tafura, mantelpiece, kana sepakati pekutanga petafura yekudyira, ichiwedzera kune yemafaro mamiriro.
Chipo Chakanakisisa cheZororo: Ichi chipo chemhando yepamusoro, chakareruka uye chakakwana cheKisimusi. Iyo inokodzera vana, shamwari kana sekuunganidzwa. Mumhanzi unofadza, mwenje unopenya, uye zviitiko zvine mutsindo zveKisimusi zvinoita kuti Kisimusi inotonhora izere nekudziya.
Simba, Chiedza, uye Mumhanzi
Mwenje ine mavara, zvitima zvinotenderera, uye inonakidza mimhanzi yeKisimusi inogadzira yakasimba mhemberero mamiriro uye inowedzera inonakidza mhepo kune iri kuuya mutambo.
Iyo saizi ine mwero uye inogona kuiswa padhesiki, dome, yekupfeka tafura, yemubhedha tafura. Zviri nyore kuchengeta nekuronga kana zvisiri kushandiswa, uye hazvitore nzvimbo.
Shandisa 3AA mabhatiri (Asina Kubatanidzwa) emagetsi. Inoshanda pasi pemamiriro emagetsi akaderera (4.5V), iri yakachengeteka. Haufanire kunetseka nezvekuvhunduka kwemagetsi kubva kuvana kana zvipfuyo.
Anodiwa mutengi, nekuda kwechiedza chemwenje, kupenya kwemonitor, chiyero chemanyore, nezvimwewo, panogona kuve nemisiyano mishoma muvara uye saizi pakati pemufananidzo nechinhu chaicho. Wepachokwadi tariro kuti iwe unogona kunzwisisa! Ndatenda.
Post nguva: Jul-15-2021